Sida dib loogu noqdo ama dib loogu bilaabo iPhone cusub X / Xr / Xs 3 talaabo oo fudud | Wararka IPhone
Sida dib loogu noqdo ama dib loogu bilaabo iPhone X cusub saddex talaabo oo fudud
Ignacio Sala | | Casharrada iyo buugaagta
Imaatinka iPhone X cusub waa a isbeddel cusub oo ku yimaada habka loo sameeyo dib-u-dejin adag ama dib-u-kicinta qalabka haddiiba ay dhacdo "qabasho" sabab kasta ha noqotee. Waana in moodooyinka iPhone ka hor iPhone 7 iyo 7 Plus, habka dib loogu bilaabi karo qalabka ay ahayd adigoo riixaya badhanka guriga iyo badhanka korontada isla waqtigaas. Imaatinka iPhone-ka cusub ee 7 iyo badhanka badhanka jirka oo meesha ka baxay, Apple waxay wax ka badashay qaabkii dib loogu dhigi lahaa ama dib loogu bilaabi lahaa iPhone-ka, markan waxay ahayd waqtigii la riixi lahaa badhanka awooda iyo badhanka mugga isla wakhtigaas.
Wixii ah nooc cusub oo maanta ka furaya dukaankiisa Apple, waxaan mar labaad badaleynaa howsha markana markaan si dhib yar badhano ugu ridi karno iPhone X cusub waxa aan sameyno waa seddex talaabo oo fudud oo aan ku sharixi doono ka dib boodka.
1 Sida dib loogu bilaabo ama dib loogu dhigo iPhone X / Xr / Xs
2 Sida loo demiyo iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xr, ama iPhone Xs Max
3 Sida dib loogu bilaabo iPad Pro leh Aqoonsiga Face
4 Sida loo damiyo iPad Pro oo leh ID ID
5 Waan xidhay ama dib ayaan u bilaabay qalabkii
6 Muxuu taleefankayga iPhone-ka u laalaadaa
Sida dib loogu bilaabo ama dib loogu dhigo iPhone X / Xr / Xs
Marka shaashadda iPhone, iPad ama iPod taabashada madow ama qalabku waa mid aan jawaab celin lahayn Mid kasta oo ka mid ah badhannada ama isdhexgalka aan ku sameyno shaashadda, waa inaan ku qasabnaa dib u bilaabida aaladdayada.
Sida dib loogu bilaabo ama dib loogu dhigo iPhone X haddii ay dhacdo ha u jawaabin si kasta:
Waxaan riixnaa ah badhanka mugga oo waan sii deynaynaa
Waxaan riixnaa ah badhanka mugga hoos ayaan u deynaynaa
Waxaan sii wadeynaa badhanka dhinaca «On / Off» ilaa astaanta tufaaxa ay soo muuqato
Haddii ay dhacdo in dib-u-dhammaystirkan qalabku uusan xallin dhibaatada, waxa aan sameyno waa helitaanka ama isku dayidda helitaanka goobaha iPhone. Waxaan ku kaydsaneynaa iTunes, iCloud ama meelkasta oo aan dooneyno waxaana aadeynaa Settings -> Settings -> General -> Dib u bilaaw. Tani waa inay dib u bilawdo iPhone X oo ay xalliso dhibaatada, xaalad kasta ha noqotee marwalba waa inaan sameynaa nuqullo nuqul ah haddii ay dhacdo noocan oo kale ah oo soo baxa oo ah inaan dib u soo celinno iPhone.
Sida loo demiyo iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xr, ama iPhone Xs Max
Ilaa la soo saaray iPhone X, badhanka guriga / hurdada ee iPhone sidoo kale wuxuu noo ogolaaday inaan damino qalabka haddii aan hoos u hayno ilbiriqsiyo yar. Si kastaba ha noqotee, markii la bilaabay iPhone X wax walba waa la beddelay. Haddii aan dooneyno inaan damino iPhone X, iyo moodooyinka dambe waa inaan iska ilaalino si wada jir ah u riix badhanka guriga / hurdada dhinac kasta oo badhanka mugga leh.
Waqtigaas, shaashadda iPhone-keena ayaa tusi doonta soojiidasho nagu martiqaadeysa inaan farta ku dhajino iyadoo raacaysa waddadeeda dami qalabka.
Tani maahan sida kaliya ee aan ku damineyno iPhone X, maaddaama aan u marayno menus-ka Settings, waxaan sidoo kale haysannaa fursad aan ku daminno iPhone-keena, iyadoon loo eegin nooca. Tani waa inaan tagnaa Dejinta> Guud> Awood koronto. Doorashadan sidoo kale waxaa laga heli karaa iPad-ka, iyadoon loo eegin nooca uu yahay.
Sida dib loogu bilaabo iPad Pro leh Aqoonsiga Face
Nooca 'iPad Pro 2018' wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee lagu dhufto suuqa iyadoo aan lahayn badhanka guriga ee la socday qalabkan tan iyo qaabkiisii ​​ugu horreeyay. Si loo bixiyo cabir ballaaran oo shaashad ah oo isla cabir ah, Apple wuxuu go'aansaday inuu ku daro tikniyoolajiyadda Aqoonsiga Aqoonsiga Face ID-ga iPad Pro sannadka 2018, sidaa darteed badhanka bilawga ayaa baaba'aya dibna uma bilaabi karno qalabka sidii aan horeyba u sameynay.
Nidaamka dib loogu bilaabayo iPad Pro leh Aqoonsiga Face iyo moodooyinka dambe waa mid aad ufudud oo waqti dheer nagagama qaadan doonto, waa inaan raac talaabooyinka hoose:
Riix oo si deg deg ah u sii daa batoonka mugga.
Riix oo si deg deg ah u sii daa badhanka mugga hoos.
Riix oo hayso batoonka Guriga / Hurdada illaa aaladda dib loo bilaabo.
Sida loo damiyo iPad Pro oo leh ID ID
Nidaamka lagu daminayo iPad Pro oo leh ID ID Waa isku mid sidaan sameyno si aan u damino iPhone X iyo moodooyinka dambe. Kaliya waa inaan riixnaa badhanka bilowga / hurdada oo aan sii deynno midkoodna labada badhamadood ee mugga ah illaa inta uu ka soo baxayo shaashadda shaashadda oo nagu martiqaadeysa inaan damino qalabka.
Waan xidhay ama dib ayaan u bilaabay qalabkii
Sida kombuyuutarka, dib u bilaabiddu lama mid aha daminta. Haddii aan sii wadno daminta iPhone-ka, nidaamka qalliinka ayaa mas'uul ka noqon doona xiritaanka dhammaan howlaha furan si aan ugu gudubno xiritaanka amniga ee nidaamka qalliinka iyo in uusan soo bandhigin dhibaatooyinka hawlgalka markaan mar kale bilowno. Isla aragtidan ayaa quseysa kombiyuutarada.
Dhinaca kale, haddii aan dib u bilowno qalabka, hawlgalka nidaamka qalliinka gebi ahaanba waa la jaray, iyada oo aan la siinin waqti codsiyada iyo adeegyadu ay si sax ah ugu xirmaan qalabkeenna. Sidii kiiskii hore, aragtidan ayaa sidoo kale khuseysa kombuyuutarrada. Dhibaatada dib u bilaabida kombiyuutarkayagu waa taas kaliya ma waayi karno xogta nidaamka, maaddaama qayb ka mid ah nidaamka qalliinka la kharribi karo, laakiin sidoo kale hawshani waxay qaadataa waqti dheer in aaladdu mar kale shaqeyso.
Goorma waxaan ku qasbanahay inaan dib u bilowno iPhone-keena, maxaa yeelay kama jawaabeeyso wax shaqo ah, ama midka noo ogolaanaya inaan damino nidaamka, ma la kulmi doonno wax khatar ah oo xog lumis ah ama in kuwani ay fursad u leeyihiin in la musuqmaasuqo, maadaama nidaamka gebi ahaanba la joojiyay oo uu yahay ficil la'aan.
Muxuu taleefankayga iPhone-ka u laalaadaa
Sababta ugu weyn ee sababta uu iPhone-ku u muujin karo dhibaatooyinka hawlgalka, waxaan uga helnaa labadaba nidaamka qalliinka iyo codsiyada gaarka ah. Apple waxay naqshadeysaa nooc kasta oo cusub oo iOS ah tiro cayiman oo qalab ah, sidaa darteed waxay la jaanqaadaysaa mid kasta iyo mid kasta oo iyaga ka mid ah, sidaa darteed waxqabadka IPhone-geena waa inuu noqdaa sida ugu macquulsan.
Nooc kasta oo cusub oo macruufka ah, horumariyayaashu waa inay cusbooneysii barnaamijyadaada si looga dhigo iyaga 100% la jaan qaada nooca cusub ee macruufka ah. Nasiib wanaag dadka isticmaala, horumariyeyaasha badankood si dhakhso leh ayey u cusbooneysiiyaan codsiyadooda si ay ula jaan qaadaan oo aysan u helin arrimo waxqabad ah Haddii ay qaataan waqti ka dheer intii loo baahnaa, Apple waxay la xiriirtaa iyaga si loo dedejiyo habka cusbooneysiinta haddii aysan rabin inay is arkaan meel ka baxsan App Store.
Laga soo bilaabo 2017, Apple waxay u diyaarisay dhammaan isticmaaleyaasha a - barnaamijka beta ee dadweynaha, sidaa darteed isticmaale kasta oo raba inuu tijaabiyo wararka nooca soo socda ee iOS-ka wuu sameyn karaa isagoo aan noqon horumariye. Sida caadiga ah, Apple badanaa waxay sii deysaa dhowr betas oo ah nooca xiga ee iOS ee loogu talagalay horumariyeyaasha kaliya marka hore, ka hor inta aan la sii deynin beta dadweynaha.
Sababtuna waa mid kale mooyee xasilloonida nidaamka. Xasiloonida nidaamku waa mid labaad oo loogu talagalay horumariyeyaasha, maaddaama ujeeddadiisu tahay inay bilaabaan inay cusboonaysiiyaan codsiyadooda nooca cusub ee iOS isla markaana ay si kadis ah ugu darmaan iswaafajinta howlaha cusub ee Apple hirgelisay.
Xasiloonida qalabkeena ay maamusho beta beta maahan midka ugufiican haddii aan isticmaalno iPhone-keena maalin kasta iyada oo ah aaladda ugu weyn, maadaama dib loo bilaabi karo waqti ka waqti iyo sabab la'aan, codsiyada waa la xiri karaa ama si toos ah looma furi karo waqti kasta marka lagu daro qaadashada waqti dheer in la furo ... Waa beta iyo sida beta nidaamka qalliinka, Waxay ku jirtaa horumarinta illaa nooca ugu dambeeya la sii daayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida dib loogu noqdo ama dib loogu bilaabo iPhone X cusub saddex talaabo oo fudud
Waxtarka ugu fiican ee saaxiib waxaad iga badbaadisay a
David Leonardo Gómez Pulido dijo
Xaaladdaan ah COVID19, iyadoo taxaddar taxaddar leh leh biyo (ha quusin ama ha hoos dhigin qasabadda), si fudud calaacasha gacanta si taxaddar leh u mari biyo saabuun leh. Taleefanka gacantu wuu daaran yahay (lammaanaha harada tufaaxa, ka dib 10-15 ilbidhiqsi kadib, shaashadda ayaa dhalaalaysa oo damineysa, harada tufaaxa ayaa mar kale soo muuqaneysa oo wareegga ayaa sii socda. Dhig meel kululeeyaha hortiisa ah, sugaya biyaha laga yaabo u galay si ay u uumi baxdo, waxaana rajeynayaa inaan dib u heli karo iPhone-kayga.
Gunaanad, iPhone X waa qalab aad u jilicsan oo loogu talagalay biyaha, run maahan in iPhone X uusan biyuhu oollin.
Jawaab David Leonardo Gómez Pulido
Apple waxay yeelan doontaa markiisa si ay uga jawaabto kiiska Spotify ee EU
Adeegyada ICloud waxaa sidoo kale saameyn ku yeeshay dhicitaankii Google Cloud